भुन्टी र कान्छी सिरियलकी ‘मु, कुली’ श्रीमान र छोरीसहित पहिलो पटक मिडियामा । २३ जना छोराछोरी छन्, कुनै दिन भात खान चामल पनि थि, एन (भि, डियो हेर्नुस) – Ap Nepal
Prevआज नेपाल पैसा पठाउँदै हुनुन्छ ? साउदी,कतार, दुवइ मलेसिया लगायत देशको हेर्नुहोस यस्तो छ बिनिमय दर
Nextगरे के हुँदैन र ? खानलाउन नै नपुग्ने यी महिलाको अहिले दैनिक आ, म्दानी ३५ सयसम्म हुन्छ ; हे’र्नुहोस् उनको सफ’ लताको कथा (भि, डियो सहित)
आज पनि घट्यो सुनको मुल्य , तोलामा यसरी हुदै कारोवार
बिवाह पछि डोली च;ढ्नु अघि धेरै रोईन स्वेता, आफन्तको पनि चल्यो रुवा, बासी (भि,डियो सहित)